- मोदीको भ्रमण समयमा जे देखियो (फोटो सहित)
मोदीको भ्रमण समयमा जे देखियो (फोटो सहित)
काठमाडौं: दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आइपुगेका छन्। जनकपुरबाट एयर इन्डियाको जहाज चढेर मोदी काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएका थिए । विमानस्थलमा उनलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्वागत गरे।
मोदीको स्वागतको लागि विमानस्थल बाहिर विभिन्न संघसंस्था तथा अन्य नागरिकको उपस्थिति थियो । विमानस्थल बाहिर तीनकुने वरपरका सबै पसलहरु प्रहरीले बन्द गराएका थिए । उनको स्वागतको लागि शारदा उच्च मावि तिलगङ्गाका शिक्षक विध्यार्थीको उपस्थिति थियो । काठमाडौं म.न.पा. शिक्षा शाखाका प्रमुखको समन्वयमा झण्डा पनि का.म.न.पा. शिक्षा शाखाले उपलब्ध गराएको प्रअ ठाकुर प्रसाद सिग्देल र शिक्षक बालकृष्ण खनाले मोदीको स्वागत सहभागिता जनाइएको बताए ।
कंञ्चनजगां सामाजिक व्यलफेएर फाउन्डेसन र मिडिया कन्सल्टेन्सीले नेपाल भारत सम्बन्ध अमर रहोस् भन्ने टिर्सट नेपाल भारतको झण्डा सहित उपस्थिति थियो । हिन्दु युवा जनशति संघसँग सहकार्य गरी मोदीको स्वागतको लागि विमानस्थलमा ठुलो संख्यामा उपस्थिति भएको कंञ्चनजंगाका महासचिव सुरेन्द्र कर्णले बाताए ।
विमानस्थलमा मोदी अवतरण भईसकेपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । उनको सुरक्षाका लागि हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरिएको थियो । सडकमा अाधा घण्टा अगाडि नै सवारी साधान बन्द गराइएको थियो ।
विमानस्थलबाट मोदी चुच्चेपाटीस्थित हायात होटल गएका थिए । होटलमा केहीबेर आराम गरेपछि मोदी सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा हुने गार्ड अफ रनरका लागि सरिक भए ।
मोदी टुँडिखेलमा जाने क्रममा बौद्धस्थित हायात होटलबाट टुँडिखेलसम्म सवारी साधान चलाउन रोक लगाइएको थियो । उनको भ्रमण भएको समयमा जनताले दुःख भएको बताएका छन् अति आवश्यक काममा पनि जान नपाएको बताएका छन् ।
बानेश्वरमा प्रहरीले पैदल यात्रुलाई रोक्न खोज्दा हाम्रो पनि तपाईका जस्तै डिउटी भएको र जान दिन आग्रह गरेका थिए । उनको भ्रमणको बेला सडकमा सवारी साधन बन्द तथा पैदल यात्रुमा रोक लगाउँदा आम नागरिकले सास्ती भएको बताएका छन् ।